SOMALITALK - BORLÄNGE
URURADA SOOMAALIDA BORLÄNGE OO KU MIDOOBEY DANAHOODA
Dadweynihii kasoo qayb galay xafladda
Waxa ay in muddo ahba ku howlanaayeen dhamaan bulshada Soomaaliyeed ee ku daqan Degmada Borlänge sida ay u soo afjari laahaayeen isfahan waagii u dhaxeeyey ururaradii ka jiray deegaankaas, oo aad u fara badnaa marka loo eego dadka ku nool magaaladaas.
Waxaa lagu qiyaasaa dhamaan Soomaalida degan magaaladaas ilaa iyo 180 oo u badan Carruur iyo dhalinyaro, halka ay dadka waaweyni kaba badneyn 60 qof sida uu ii sheegay sargaal ka shaqeeyo xafiiska maamulka Degmada.
8 urur ayaa ka jiray magaaladaan waxaana midoobey 7 ka mid ah. Waxayna shirar xidhiidh ah la yeesheen qaar ka mid ah xisbiyada siyaasada ee wadankan iyo maamulka gobolka. Hadaba xaflad ballaaran oo lagu soo dhaweynayey xisbiga Shaqaalaha ee talada waddanka haya, laguna muujinayey inay dhamaatey qeybsanaatii Soomaalida Borlänge ayaa waxaa lagu qabtey Talaadadii la soo dhaafey hoolka shirarka.
Gudoomiyaha Golaha Ururada Soomaalida Maxamed Kismaayo
Ismaaciil oo ka mid ahaa guddigii qabanqaabada shirka, guddoomiyana ka ahaa mid ka mid ah ururadii danahooda ku midoobey, ayaa waxuu cod baahiyaha ku soo dhaweeyey Guddoomiya Golaha midowga ururada Soomaaliyeed ee Borlänge mudane Maxamed Xuseen Kismaayo.
Maxamed Kismaayo waxuu si aad ah ugu dheeraadey Shaqo la'aanta ku raagtey Soomaalida iyo baahida loo qabo in dhallinyarada Soomaaliyeed loogu heli xal looga badbaadiyo mukhaadaraadka iyo ka niyadjabka waxbarashada, iyo waliba sidii looga caawin lahaa maadooyinka ay kaalmada uga baahan yihiin.
Waxaa dabadeedna ka hadlay siyaasiyiin iyo saraakiil ka tirsan maamulka Degmada oo kala duwan, waxaa ka mid ahaa masuuliyiintiii xafladaas ka hadashey Peter Hultqvist oo ah guddoomiyaha maamulka degmada Borlänge, ahna guddoomiyaha Xisbiga Shaqaalaha ee gobolka Dalarna.
Qeyb ka mid ah Siyaasiyiintii maamulka Gobolka Dalarna
Peter waxuu aad ugu nuuxnuuxsaday muhiimada uu leeyahay midowgu iyo abuubulku gaar ahaan qaxootiga, waxuuna xusay maanta inay jirto fursad weyn marka loo eego 60-dameeyadii oo soo galootigii soo galay wadankaan ay u badnaayeen Finlandeys ku yimi xoogsi, waxaana soo galootigaas loola dhaqmi jiray in ay yihiin dabaqada labaad, laakiin taasi maanta ma jirto, idinkana ha isu arkina marti inaad ku tihiin dalkaan ee is abaabula, xaquuqdiinana wadajir ku doonta, hadday noqon lahayd shaqo iyo waxbarasho, Peter waxuu kaloo ballan qaadey inay diyaar u yihiin wadashaqeyn hoose inay la yeelan doonaan Golahaan.
Warbixintii hore ee Magaalada BORLÄNGE.
Abdulhakim Ahmed Guled
CIYAARAHA XAGAAGA EE SOOMAALIDA YURUB OO LAGU SOO GEBO GABEEYEY SWEDEN
BORLÄNGE IYO SOMALITALK.COM Warbixintii Ahmed-shil Mohamed
Kulan dhexmaray Maamulka Qaxootiga iyo Soomaalida Borlange GUJI.HALKAN
Degaanka sii xumaanaya iyo biyo la'aanta Soomaaliya
Gudoomiyihii Yaabka Badnaa
Xisbiga Shaqaalaha ee Borlänge oo Ballanqaaday Cirib-tirka Shaqo iyo Xirfad La'aanta Soomaalida